एउटा लेखकको मसी शहिदको रगत भन्दा महत्वपुर्ण हुन्छः साहित्यकार थापा | KTM Khabar
२०७४ असोज ३० गते २२:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । साहित्य भावनाको भंगालो मात्र हैन मन मस्तिष्कको अनुभुतीसंगै समाज परिवर्तनको आधार पनि हो । कथा, कविता, गीत, गजल तथा अन्य धेरै विधामा भएका अमृतमय शब्दहरुले मान्छेको जीवनमा आनन्द थपिन्छ । यसै पेरि–फेरीमा रेहर अध्यात्मिक ग्रन्थहरुका ज्ञाता तथा कवि, कथाकार रमेश जंग थापासंग केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
कवी मान्छे कवीताबाट नै सुरु गरौ है
ठिक छ । म कविता सुनाउछु यो समसामयिक विषयमा लेखिएको कविता हो । यो कविता अलि आम मानिसले नबुझिने जस्तो लागे पनि यो समाजको चित्रण हो । यसमा मैले संस्कृतका शब्दहरु प्रयोग गरेको छु । बर्तमान परिप्रेक्षमा मान्छेहरु निराश र चाहनाहरु धुमिल भएर गएको छ । एउटा क्रान्ति आएर जुन किसिमको परिवर्तन अएको छ यसको चित्रण हो । शिर्षक अन्तक अधिस्वर नामको यो कविता नेपालको बर्तमान पेरिफेरीको विम्ब हो ।
लठ्ठीको हातमा फेरी डण्डा गयो,
कमजोर हातमा पुरानै झण्डा पुग्यो ।
उही अनाश्रुत पात्र पुन देखा पर्यो,
चिल्लो देहमा मोसो दली,
चढेर माथी अट्टाहाँस गरी
घोषणा गर्यो मै हुँ अन्तक अधिस्वर ।। (बाकी भिडियोमा )
अहिले के मा ब्यस्त हुनुन्छ ?
म अहिले साहित्य साधनासंगै आफ्नो काम अनि नेवानी साहित्य समाजको अध्यक्ष भएर साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न छु । यहि नै हो केही लेख्दै छु अनि पढ्दै छु । यसैगरी दिनहरु बित्दै छन् ।
अहिले कुन बिधामा कलम चालाउदै हुनुन्छ ?
एक महिना भयो एउटा कथा लेख्दै छु । यो कथा महाभारत कालीन पाँचहजार बर्ष पहिलेको एउटा पात्रलाई आधार मानेर कथा लेख्दै छु र यो कथालाई भबिष्यमा उपन्यासको रुपमा अघि बढाउने मनसाय छ । मैले अहिले चाँही एउटा उपेक्षीत ईतिहाँस पात्रको रुपमा लुकेको पात्र छ र यसलाई म पाठक माझ पुर्याउने प्रयत्नमा छु ।
तापाई साहित्यको साधक मान्छे, साहित्य र राजनीति जोडिन्छ हो ?
कसैले साहित्य राजनीतिसंग जोडिन्छ भन्छन । कसैले सहित्य नै राजनीतिको जग भन्छन तर म चाहीँ फरक तरिकाले लिन्छु । म भन्छु साहित्य बाउन्डलेस छ । अपरिमित छ, यसको सिमा नै छैन । यसलाई राजनीतिले हाक्न हुदैन । जब म कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डाको मुनी बसे भने मैले गरेका साहित्य श्रृजना सोही झण्डा उन्मुख हुन्छन । त्यसैले साहित्यलाई खुम्च्याउन हुदैन भन्ने मेरो कुरा हो ।
लेखनीबाट परिवार पाल्न सकिने वाताबरण छ कि छैन ?
साहित्य म चाँही आनन्दको नीम्ति लेख्छु । यहाँ साहित्यलाई मागी खाने भाडो पनि बनाईएको छ । राता–रात कवी साहित्यकार हुने अनि बिभिन्न मिडियामा छाउने अनि साहित्यकारको पगरी बेच्ने म यसको विरोधी हुँ । यसलाई यसरी लिन हुदैन र आनन्दको रुपमा हेर्नु पर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । साहित्यलाई जिवत बृतिको रुपमा नहेरेर आनन्द र आत्म सन्तुष्टिको रुपमा हेर्नु पर्छ । अरविन्द घोषले १८ बर्ष लगाएर सावित्री महाकाब्य लेख्नु भयो । यत्रो समय घोत्लीएर त्यसलाई पैसासंग तुलना गर्न थालियोे भने त घोत्लीएर पैसा त आउदैन नी । हो त्यसैले साहित्य भनेकै आत्म सन्तुष्टिका लागि हुनु पर्यो अनि उत्कृष्ट श्रृजना बन्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
तपाई जस्तो सर्जकलाई कतिखेर सन्तुष्टि मिल्छ ?
म जतिखेर आफ्नो रचना पाठकसम्म पुर्याउछु । पाठकले मन पराएको अभिब्यक्ति सुन्छु । त्यति बेला म आनन्दित हुन्छु र मलाई आत्म सन्तुष्टिको महशुस हुन्छ । पाठक र लेखको अनुन्याश्रीत सम्बन्ध छ ।
राता–रात साहित्यकार हुन खोज्ने प्रती तपाईको भनाई के छ नी ?
के भनौ तर मेरो भनाई रात–रात कवी हुन खोज्यो भने उत्कृष्ट बन्न सक्दैनन् । त्यो सस्तो लोकप्रियताको निम्ति मात्रै हुन्छ । त्यसैले १०० पुस्तक पढौ १ पुस्तक लेखौ अनि उत्कृष्ट बन्न सक्छ भन्ने मान्छे हुँ ।
काम्रेडको घोडा नामक कथा पाठकले मन पराउनु भएको छ, त्यसमा के चित्रण गर्न खोजिएको थियो ?
यो कथा द्धन्द सकिए पछी लेखिएको कथा हो । घोडा भनेको जनता र त्यो जनतामाथि चढेर सत्तामा पुग्ने कुरालाई देखाउन खोजीएको थियो ।
तापाँईका रचनामा देशको अवस्था बोली रहेको हुन्छ, भनेपछी देशको चिन्ता तपाईहरुलाई पनि हुन्छ है ?
अबश्य हुन्छ नी । देशमा भएको बिसंगतीलाई हामीले अभिब्यक्ती दिने हो । हामीले बिसंगतिलाई कलमले लेख्ने हो । हामी आर्मी हैनौ, पुलीस हैनौ, हामी त लेखक हौँ । एउटा लेखको मसी, शहिदको रगत भन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने भनाई छ । एउटै शब्दले पनि ठुला–ठुलो परिवर्तन भएको ईतिहाँस छ ।
आउने पुस्तालाई जो कलम चलाउन चाहन्छन्, उहाहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
मेरो कुरा स्पष्ट छ । सय किताव पढौ, एक रचना लेखौ । पहिलो कुरा पढ्नै पर्छ नपढी लेखेका कुरा फोस्रा हुन्छन । त्यसैले सय कविता पढौ एक लेखा,ै सय कथा पढौ, एक कथा लेखौ अनी मात्र उत्कृष्ट रचना जन्मिन्छ ।
तपाई विज्ञानको विद्यार्थी, सँस्कृत प्रती मोह कसरी जाग्यो ?
ठिक भन्नु भयो । म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ । सुरु–सुरुमा लेख्न सक्दिन की भन्ने लाग्थ्यो तर मैले अध्यनको दायरालाई फराकिलो बनाउदै गए । र मैले अध्यात्मिक ग्रन्थहरुमा घोत्लिदै समय विताउन थाले र मैले शब्दकोषको पुरै छान मारे । कयौ महिना शब्दकोष पढेको छु । र हराई रहेका शब्दहरुलाई मैले अफ्ना रचनामा उजागर गर्ने पनि गरेको छु । अध्यनको दायरा बढाउने क्रममा मैले बुझेकी पुर्वीय सभ्यता र हाम्रो अदीम ग्रन्थहरुमा जति ज्ञान छ । त्यसको आधा पनि पाश्चात्य साहित्यमा छैन । छैन भन्दैमा नपढ्ने भन्ने हैन तर हाम्रो साहित्य र ग्रन्थहरु ज्यादै उत्कृष्ठ छन् तर अध्यन गर्नेहरुको कमी छ ।
अन्त्यमा पाठक दर्शकलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
अन्त्यमा हाम्रो साहित्य, हाम्रो दर्शनलाई जोगाउँ । आफ्नोपनलाई नछोडौ र अध्यनको दायरालाई बढाऔ । शब्दकोषहरुलाई सजाएर राख्ने हैन त्यी शब्दकोषहरुलाई अध्यन गरौ । मनन गरौ, चिन्तन गरौ । अहिले हाम्रो अबस्था घरमा आमाले पकाएको खिरलाई छोडेर भिख माग्न हिडेको अबस्था छ । यसलाई छोड्नै पर्छ । पहिले घरको खिर खाऊँ अनी बाहिरको खानु पर्छ भन्ने मेरो भनाई छ ।
समय र संवादको लागी धन्यबाद
यहाहरुलाई पनि धन्यबाद छ ।
रमेश जंग थापासंगको भिडियो संवाद तलको युटुव लिंकमा हेर्न सक्नु हुनेछः